Nasaha sidaan ayaa loo dhuuqaa waqtiga galmada socoto - Hablaha Media Network
Nasaha sidaan ayaa loo dhuuqaa waqtiga galmada socoto
HMN:- Inta badan dumarka ayaa raaxo macaan oo heer sare ah waxeey ka qaataan ibta hore ee naasaha dumarka,inkastoo dabeecad ahaan dumarku aysan isku dambeecad eheen. Waxan shaki ku jirin in dumarka 89% ay raaxo waali ah ka qaadaan dhuuqmada ibta naaska weliba marka aad ilkahaa hore ee afka aad ku qabato ibta naaska,waxeey gabadhu dareemeysaa raaxo heer sare ah,hana ka bixin afka inta naaska inta ay gabadha ka qaadaneyso raaxo macaan. Hadii aysan gabdhu jecleen inaad inta hore naaska u dhuuqdo,isku day inaad si farsameysan u dareensiiyo macaanka ku jiro dhuuqmada ibta naasaha. Afti laga aruuriyay dumarka la raaxeesto rag kala duwaan ayaa isku aragti waxeey ka noqdeen in raaxo waali ah laga qaado dhiiqdamada ibta naasaha. Faa’idooyinka ku jiro raaxaxada inta naasaha ayaa lagu sheegay qodobadaan. 1­In Lamaanahaga ay maqsuud ku noqato. 2­In Lamaanhaaga ay hesho raaxo macaan oo aysan ka caajiseen. 3­In Lamaanhaag ay sugiweyso la kulnkaaga gaarka ah. 4­In Lamaanahaaga ay joogteyso dalabkaaga dhinaca Galmada ah.